"Aabahay Wadne Xanuun Ayuu U Dhintay, Anigana Xididdada Wadnaha Dhiigga U Keena Ayaa I Xidhmay, Nasiib Ayaan Lahaa" - Gool24.Net
“Aabahay Wadne Xanuun Ayuu U Dhintay, Anigana Xididdada Wadnaha Dhiigga U Keena Ayaa I Xidhmay, Nasiib Ayaan Lahaa”
Tababaraha xulka qaranka Netherlands ee Ronald Koeman waxa uu ka badbaaday wadne-xanuun kusoo booday xilli uu gurigiisa joogay bilowgii bishan May, waxaana loola cararay cusbitaal ku sameeyey qalliin degdeg ah.
Ronald Koeman waxa laga daaweeyey xanjiro fadhiistay xididdada wadnaha dhiigga siiya ama ka qaada, waxaanu hadda kasoo kabanayaa xanuunkii soo gaadhay.
Tababare Ronald Koeman oo waraysigii ugu horreeyey bixiyey tan iyo markii cusbitaalka la dhigay, ayaa waxa uu ka warramay sida xaaladdiisa caafimaad tahay, waxaanu tilmaanay in nasiibkiisa oo wanaagsanaa darteed uu ku badbaaday.
Waxa kale oo uu bannaanka soo dhigay arrin aanay dad badan la socon oo ah in qoyskoodu ay hiddo u leeyihiin xadne-xanuunka oo uu hore ugu geeriyooday aabbihii.
“Waxa igu dhacay wadne xanuun, waxaana si degdeg ah la iigula cararay cusbitaalka. Xiddidka weyn ee dhexe ee wadnaha dhiigga siiya ayaa i xidhmay, kuwo kalena way guntameen.” Ayuu yidhi Ronald Koeman.
Tababare Koeman oo waqtigii uu ciyaartoyga ahaa usoo dheelay Barcelona, waxa uu xaqiijiyey in la geliyey tuunbooyin, waxaanu yidhi: “Laba tuunbo ayaa la i geliyey, waanan soo kabanayaa, laakiin waxaan xaqiiqsaday inaan nasiib lahaa.”
Intaa kaddib waxa uu Koeman daboolka ka qaaday inay hidde u leeyihiin wadne-xanuunka, waxaanu yidhi: “Aabahay ayaa u dhintay wadne xanuun isaga oo 75 jir ah. Waa xanuun qoyskayagu leeyihiin.”
Macallinka xulka Netherlands waxa uu ka sheekeeyey sidii uu wadne-xanuunku ugu soo booday, waxaanu yidhi: “Waxaan baaskiil kexeeyey 96 kiiloo mitir iyadoo saaxiibkay i wehelinayo, kaddib waxaan guriga kusoo laabtay anigoo daallan.
“Markii aan sashada bilaabay, xabbadka (shafka) ayaa i xanuunay. Waxaan bilaabay dhidid, aad ayaanan u caddaaday.
“Nasiib wanaag, xaaskayga ayaa guriga joogtay, waxaananu wacnay shaqaalaha gargaarka degdegga ah oo si degdeg ah oo ficil degdeg ah sameeyey.”